Translate ( not included in other catego in Burmese
Results for ( not included in other categories ) translation from English to Burmese
contaminated air from china can now be measured in other countries.
ပြီးတော့ ဘယ်ကိုသွားရ မှာလဲ။ ကျေးရွာတိုင်းလိုလို ဤအခက်အခဲကို ထပ်တူခံစားနေရသည်။
in other words, this is nota“rich country” problem.
နောက်တစ်မျိုး ပြောရသည်ဆိုသော် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပြသနာသည် ချမ်းသားသော နိုင်ငံများ၏ ပြဿနာမဟုတ်၊
ဗိုင်းရပ်စ်သည် အခြားသော ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများရှိ ace2 ပြသမှု ဆဲလ်များနှင့်ရော ပေါင်းစည်းသလား။
in other words, both could be the survivors of ancient hcov pandemics.
တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင် နှစ်ခုစလုံးသည် ယခင်ခေတ် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါများဖြစ်သည့် hcov၏ လက်ကျန်‌ရောဂါများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့် ပန်းနာရင်ကြပ်နှင့် copd တို့သည် နာတာရှည် အဆုတ်ရောဂါအမျိုးအစားတွင် ပါဝင်သည်။
the current draft does not includeagoal for pollution on its own, although pollution is included in the health goal.
၉) သည် လောလောဆယ်တွင် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု မည်သည့်အမျိုးအစားထံမှမဆို ဖြစ်ပေါ်လာသော သေခြင်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုကို လျှော့ချရန် တောင်းဆိုထားသည်။
in other words, these two amino acid substitutions might be critical to viral adaption to humans.
တစ်နည်းဆိုရလျှင် ဤအမီနိုအက်စစ်နှစ်မျိုးအစားထိုးခြင်းများသည် လူသားများ၌ ရောဂါအသားကျမှုအတွက် အလွန်အရေးပါနိုင်သည်။
ပဉ္စမမြောက်အဖြစ် ကူးစက်မှု အစီရင်ခံစာဖောင်တွင် ထည့်သွင်းမထားသည့် ရှိရင်းစွဲရောဂါများ သို့မဟုတ် တစ်ခုတည်းသော ပေါင်းရုံးအမျိုးအစားဖြင့် သတင်းပို့ထားသည့် ရောဂါဝေဒနာအမျိုးမျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ သုံးသပ်ချက် ပြုလုပ်မရနိုင်ခဲ့ပါ။
however, this is quitearough comparison as many other impact factors such as the number and severity of the patients should be included in the evaluation.
သို့ရာတွင် အကဲဖြတ်မှုပြုလုပ်ရာ၌ လူနာများ၏ အရေအတွက်နှင့် ရောဂါပြင်းထန်မှု စသည့် အခြားသော သက်ရောက်မှုရှိစေသည့် အချက်အလက် အများအပြားကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန် လိုအပ်သည့်အတွက် ဤသည်မှာ အကြမ်းဖျင်း နှိုင်းယှဉ်ချက်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။
ထိုနက်နဲသောအရာကို သန့်ရှင်းသော တမန်တော်တို့နှင့် ပရောဖက်တို့အား၊ ယခုကာလ၌ ဝိညာဉ် တော်အားဖြင့် ဖွင့်လှစ်တော်မူသည်နည်းတူ၊ အခြားသော ကာလတို့၌ လူမျိုးတို့အား ပြတော်မမူ။
အခြားသောမျိုးစိတ်များတွင် ရောဂါလက္ခဏာများမှာ ကွဲပြားပါသည်- ကြက်များတွင်၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းအပေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ ဖြစ်ပွားပြီး၊ နွားများနှင့်ဝက်များတွင် ဝမ်းလျှောခြင်း ဖြစ်ပွားပါသည်။
the experience from italy and the current trends in other countries show that the covid-19 pandemic is progressing rapidly in the eu/eea and the uk.
အီတလီမှ ရရှိသော အတွေ့အကြုံများနှင့် အခြားနိုင်ငံများ၏ လက်ရှိအလားအလာများက covid-19 ကပ်ရောဂါသည် eu/eea နှင့် uk တို့တွင် လျင်မြန်စွာ တိုးတက် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းကို ပြသနေသည်။
ညစ်ညမ်းမှု အလွန်များပြားစွာ စွန့်ထုတ်သော စက်မှု လုပ်ငန်းကြီးများသည် ဓာတုပစ္စည်းများကို စီမံခန့်ခွဲရန် နှင့် မြှပ်နှုံရန် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းဥပဒေများ ချမှတ်မှု အားနည်းပြီး နည်းပညာ နည်းပါးသည့် ဆင်းရဲသော နိုင်ငံများသို့ ပြောင်းရွေ့ကြသည်။
ထိုအခါလူများတို့တွင် မင်းလုပ်သော သူတို့သည် ယေရုရှလင်မြို့၌ နေကြ၏။ ကြွင်းသောသူတို့သည် သန့်ရှင်းသောအရပ်၊ ယေရုရှလင်မြို့၌ တကျိပ်တွင် တယောက်၊ အခြားသောမြို့တို့၌ ကိုးယောက် နေရမည် အကြောင်း စာရေးတံပြုကြ၏။
i've had many people contact me to either tell me that i was wrong, or that they've never heard of one, or that they're common in other latin american countries (which makes sense).
ဒါ​မှ​မဟုတ် (ယုတ္တိ​ရှိ​တဲ့) တခြား​လက်တင်​အမေ​ရိ​က​နိုင်ငံ​တွေ​မှာ​လည်း အဲ​လို​သုံး​ကြ​တယ်​ဆို​တာ ပြော​ပြ​ဖို့​ဖြစ်​ဖြစ် လူ​တွေ​က ဆက်​သွယ်​လာ​ကြ​တယ်။
there is evidence that hydroxychloroquine may have anti-cytokine storm properties.tocilizumab has been included in treatment guidelines by china's national health commission afterasmall study was completed.
ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုကွင်းတွင် ဆိုင်တိုကင်း အုံ့ကြွမှု ဆန့်ကျင်သော ဂုဏ်သတ္တိများ ရှိနိုင်ကြောင်း အထောက်အထား ရှိပါသည်။ လေ့လာမှုအသေးစား ပြုလုပ်ပြီးနောက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသား ကျန်းမာရေး ကော်မရှင်က တိုစီလီဇူမဘ်ကို ကုထုံး လမ်းညွှန်ချက်များတွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
&quot;numerous candidate drugs under study as &quot;&quot;supportive&quot;&quot; treatments to relieve discomfort during illness, such as nsaids or bronchodilators, are not included in the table below.&quot;
ဖျားနာနေစဉ် ဝေဒနာခံစားရမှုကို သက်သာစေရန် “အထောက်အကူပြု” ကုသမှုများအဖြစ် လေ့လာနေသည့် nsaids သို့မဟုတ် bronchodilators ကဲ့သို့ လျာထားသော ဆေးဝါးများစွာမှာ အောက်ပါဇယားတွင် မပါဝင်ပါ။
of critical importance is making sure pollution is included in the united nations’ sustainable development goals, which look at how to achieve future development sustainably after the current millennium development goals expire this year and include topics such as ending poverty, promoting sustainable agriculture, ensuring equitable education and more.
လက်ရှိမူကြမ်းတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု တိုက်ဖျက်ရေးကို ကျန်းမာရေးနှင့် ပက်သက်သော ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ထဲမှာသာ ပါဝင်ထားသော်လည်း ၄င်းကို သီးသန့် ရည်မှန်းချက် တစ်ခုအနေဖြင့် ပါဝင်မထားပါ။
wende facke (German>Danish)entorno en tiempo de ejecución (Spanish>English)intie meaning (Arabic>English)bf sixy (Hindi>English)bischofberger (English>German)simone (French>Latin)olivier (French>German)thanks god in my life partner (English>Hindi)toques (Catalan>Spanish)a righteous righteous love me (English>Pakistani)wringing (English>Japanese)malakas ba ang sigaw ko (Tagalog>Serbian)sto scherzanda (Italian>French)blankrad (Swedish>Danish)extra miler (English>Tagalog)az élő előadásom (Hungarian>English)matalas (Catalan>Spanish)bhai (English>Nepali)orthophosphate (French>Swedish)rint (English>Italian)tarakona (Maori>Latin)buon anniversario (Italian>English)how many children you have (English>Portuguese)do you know this person (English>Hindi)i will stand by you (English>French)